Fanadiovana ny ADN & RNA, Ngs Kit, Serivisy fanoratana ny Ngs - Tiangen
TGuide S32 Mpanafaka asidra niokleary mandeha ho azy
Kitapo ADN / RNA virtoaly virtoaly
TIANGEN Biotech (Beijing) Co., Ltd. dia mandray anjara amin'ny fanampiana ny mpanjifa ahazoana asidra nokleika ho an'ny santionany isan-karazany sy hanomezana vokatra azo hamantarana. Ny mpanjifanay dia mifantoka indrindraIn-Vitro Diagnostika sy diagnostika aretina Diagnostika orinasa, LDT labrarory Diagnostika aretina biby, génétique Reproductive (NIPT, PGD, PGS), vaksinina ary biofarmasefika.
Ny tombon-tsoa azontsika dia ny manome ny mpanjifa vokatra ampanjifaina mahomby sy tolotra. Tsy maninona izay namboarina tamin'ny vahaolana iray manontolo, ny fahombiazan'ny reagent, ary ny worklow fandidiana, ary koa ny maodely fonosana, azontsika atao ny manampy ny mpanjifa hahatratra ny lafiny rehetra etsy ambony. Hatramin'izao dia nanome vahaolana maherin'ny 600 ho an'ny mpanjifanay izahay.
TIANGEN Biotech dia miorina any Shina. Tahaka ny nandrosoan'ny 16 taona mahery, ny orinasanay dia manizingizina hatrany ny kalitao no fototra, ny mpanjifa no voalohany. Avy amin'ny RD, hanamboatra workflow, ny dingana rehetra dia fehezin'ny ISO13485 sy ISO9001 TÜV Rheinland taratasy. Hatramin'izao, ny vokatray dia efa namidy eran'izao tontolo izao miaraka amin'ny firenena maherin'ny 30.
Fanandramana amin'ny fotoana / andro
Fitsapana COVID-19 —— Detection SARS-CoV2
Pathogenic Microorganisms Solution Detection Acid Nucleic
Vahaolana fikarohana momba ny tazo kisoa afrikanina
Fanohanana avy amin'ny kilaometatra an'arivony lavitra hiantohana ny famatsiana: TIANGEN Biotech amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso NCP manerana ny firenena
Hatramin'ny niandohan'ny taona 2020, ny pnemonia coronavirus vaovao dia niparitaka hatrany Wuhan ka hatrany amin'ny faritra rehetra any Chine ary niteraka ny ahiahin'ireo olona an-tapitrisany maro. Ilay virus coronavirus dia azo ampitaina amin'ny alàlan'ny fomba sy fantsona maro samihafa miaraka amin'ny areti-mifindra mahery vaika. Noho izany, diagnostika mialoha sy fitokana-monina a ...
2019-nCov vahaolana amin'ny fitrandrahana automatique sy vahaolana amin'ny alàlan'ny TIANGEN
Tamin'ny volana desambra 2019, nisy andiana trangana pnemonia tsy fantatra antony efa natomboka avy any Wuhan, faritanin'i Hubei, ary vetivety dia niparitaka tany amin'ny ankamaroan'ny faritany sy tanàna any Chine, ary firenena maro hafa tamin'ny Janoary 2020. Tamin'ny 22:00 alina tamin'ny 27, 28 Janoary tranga voamarina ary 5794 ahiahiana tranga 2019-nCov dia ...
Nanome 150 tapitrisa Sets fitaovam-pitsapana ho an'ny COVID-19! Fa maninona ity orinasa ity no arahabain'ny orinasa IVD
Nanomboka ny taona 2020, ny indostria IVD manerantany dia nisy fiatraikany mahery vaika tamin'ny COVID-19. Miaraka amin'ny fitomboan'ny fiheverana ny andrana asidra niokrika any amin'ny firenena maro, ny orinasa IVD dia tsy vitan'ny hoe namorona ny vokatra detection pathogen respiratory fa nampihatra an'ity haitao ity tamin'ny fampandrosoana sy ny fampiharana ...